Alarobia, Oktobra 8, 2014 Alarobia, Oktobra 8, 2014 Douglas Karr
Ny Chirpify dia ahafahan'ny mpivarotra mampihetsika ny fikafika mamela ny mpanjifa handray anjara amin'ny marika avy amin'ny fantsona rehetra ao amin'ny media sosialy. Azonao atao ny mampihetsika ny fitarika amin'ny fitondran-tena mba hividianan'ireo mpampiasa media sosialy fidirana an-tsokosoko, hidiranao amin'ny votoaty manokana, sns. Ity misy ohatra iray: amin'ity alahady ity, jereo ny dokam-barotra amin'ny fahitalavitra vaovao, tadiavo ny tenifototra ary esory ny fonosanao ny tsiro vaovao. #awardsnight pic.twitter.com/ASU58SL1KX - Oreo Cookie (@Oreo) 24 Janoary 2014
Vero: Fanafody mailaka sy fivarotana indray
Zoma, Jona 27, 2014 Zoma, Jona 27, 2014 Douglas Karr
Vero dia serivisy automatique marketing amin'ny mailaka izay mifantoka amin'ny fampitomboana ny fiovam-po sy ny fitazonana ny mpampiasa. Ny fampiasana mailaka kendrena dia afaka miteraka fidiram-bola mitombo sy manatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa. Martech Zone ny mpamaky dia afaka mahazo 45% amin'ny famandrihana 6 volana amin'ny drafitra Vero Small amin'ny alàlan'ny fampiasana ny rohy afiliana! Vero Email Marketing dia misy ny mombamomba ny mpanjifa tsirairay - Araho ny angona momba ny mpanjifanao ao amin'ny tahiry mpamandrika. Ampiasao ny angona angoninao toy ny anao